Semalt: Indlela Yokunqanda Iwebhusayithi KwiGoogle Chrome
Zininzi iziganeko apho abantu banokufuna ukuvimba ukufikelela kwiwebhusayithi kwiiphequluli zabo. Ngokomzekelo, kubalulekile ukunqanda abantwana ukufikelela kwezinye iisayithi. Abazali nabo bafuna ukuhlala kunye namalungelo okukhusela iphasiwedi yale mililo yokunciphisa ukungena okungagunyazisiweyo kwi-add-ons okanye kwiwebhsayithi ethile. Ngokuqhelekileyo abantu banqabile ezi website ngokuzisebenzisa okanye usebenzisa ubugcisa befayile yefayile. Nangona kunjalo, imiyalelo yokusebenza ingaba yinkqubo enzima. Yingakho abanye abantu basebenzisa izandiso zeGoogle Chrome ukukhawulela ukufikelela kwabo kwiwebhusayithi - frezyderm dermiox skroutz.
Kulo khokelo lwe-SEO, uJack Miller, ingcali ephezulu iSemalt , ichaza isandiso esisodwa se-Chrome njengomzekelo wokubonisa le ndlela.
njani ukuvimbela isayithi
Le nkqubo inqabile kubasebenzisi be-Google Chrome. Nangona kunjalo, ezinye iiphequluli ezi zongeziweyo zingasebenzisa le ndlela yokuvimba iiwebhusayithi. Ngaphezu koko, ukwandiswa kwemdla apha kuya kuba kwandiswa kweSayithi. Kukho ezinye izandiso ezifana ne-SpyVisit, kodwa ukusebenza kwazo kuncinci. Landela lamanyathelo:
Qala i-Google Chrome kwaye nqakraza 'izicwangciso.'
kwimenyu yesethingi, jonga kwi 'Iimpawu ezingakumbi' kwaye nqakraza kwi 'extensions.'
Ukusuka apha, unako ukuya 'kwandiso olongezelelweyo.'
Le menu ivula isitolo sewebhu se-Google Chrome. Kanye nje njengezitolo ezithandwayo zokusebenza, khangela i-'BlockingBlocks 'kwaye nqakraza ukungena..
Cofa 'kongeza kwiqhosha le-Chrome' ukuqala inkqubo yofakelo kwaye ulinde ukuba igqibe.
Xa ulandela le nkqubo, kufuneka ukwazi ukulawula isiphequluli sakho kunye neewebhsayithi ezingaboniswa ngumntu. Kubalulekile ukuqaphela ukuba ukongezwa kwe-SiteBlock kuGoogle. Akufanele ube neyiphi na imiba ephathelele ukufaneleka okanye umbhali wale software. Le nkqubo ifuna ukuba ungeze iiwebhusayithi ozifunayo olu longeza ukuvimba. Ungayisebenzisa le ndlela ukukunceda ukukhusela ezi ndawo:
Kwipaneli yokukhangela yeGoogle, unako ukukhawulela amasayithi avela kwi-SERP popups.
Unako kwakhona ukuya kwisetyu.
Yiya ukulawula izandiso kwi-Chrome browser kwaye ukhethe iSizaBlock.
Ukusuka apha, nqakraza 'iindlela zokukhetha.'
Yongeza idilesi zewebhu zewebhusayithi ofuna ukuzivimba phantsi kwe-'esayithi ukuvimba. '
Khumbula ukuchofoza 'iindlela zokugcina'
Unokwenza uluhlu lwewebhusayithi ezininzi ongazifuni abantu ukufikelela kuzo. Kubalulekile ukuba ungabandakanyi i-'wwww okanye https: // 'inxalenye yewebhusayithi oyithintelayo. Le ndlela ingakuqinisekisa ukuba ukhawulela yonke imimandla ngaphandle kweprotocol. Emva kokugcina ezi zicwangciso, unokuvavanya i-addon ngokuzama ukufikelela kwenye yeewebhusayithi kwiintlobo zakho ezivaliweyo. Isigijimi esithi "Sivinjelwe isandiso se-SiteBlock" siqinisekisa impumelelo yale nkqubo.
Zininzi iindlela zokuba kutheni abantu bangathanda ukuvimba iiwebhusayithi kwiiphequluli zabo. Ngokomzekelo, abanye abazali bafuna ukukhawulela abantwana ukuba bangene kwiwebhusayithi yomxholo wokudala. Kule macandelo amaninzi, abantu banokugqiba ekubeni basebenzise iindlela ezahlukeneyo zokuthintela ukufikelela. Esi sikhokhelo se-SEO singakubonisa indlela yokuvimba ezinye iiwebhusayithi usebenzisa i-add-ons ze-Chrome. Ukusuka kwi-SIteBlock yethu elula yokufaka, 'ungayinqanda ukufikelela kwezinye iindawo okanye iisayithi ezivela kwisiphequluli sakho se-Chrome. Ungasebenzisa le nqubo kwezinye iiphequluli usebenzisa oku okanye ezinye izandiso.